…..पछि रामचन्द्र पौडेलका छोरा कारवाही परे – YesKathmandu.com
शनिबार २५, भदौ २०७३
नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेल ग्रिनकार्डधारी भएको तथ्य सार्वजानिक भएको छ । सोही ग्रीनकार्ड जोगाउन उनी महत्वपूर्ण जागिर छाडेर बेलायत पलायन भएको रहस्य हालैमात्र सार्वजानिक भएको हो ।
पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले चिन्तन बिदेशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र जोगाउन बिदेश फर्किएको खुलाशा गरेका छन् । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुंदा चिन्तनलाई गरिबि निवारण कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । डेड लाख तलब र भत्ता तथा अन्य सुविधाका कारण यो पद सरकारी मध्येको आर्कषक मानिन्छ । बेलायतमा बस्दै आएका चिन्तन बुबाको पहुँचका कारण उपाध्यक्ष जागिर पाएका थिए ।
विदेशमा स्थायीरुपमा बसोबास गर्ने प्रमाणपत्र लिएकाहरुलाई नेपालको कुनैपनि सरकारी निकायमा नियुक्ती नगर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भयो । त्यसपछि पटकपटक प्रधानमन्त्रीको दौडमा सामेल भइसकेका सत्तारुढ दलका एक नेताले छोरालाई बिदेश भगाए । गरिवि निवारण कोषमा उनको छोरा योग्य भन्दै नियुक्त गरिएका थिए । राजिनामा दिएलगत्तै उनी परिवारका साथ बेलायत हानिएका थिए । उनीसँग बेलायतको स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र रहेको बताइन्छ ।
कर्णालीले पाँच पाथी चामल लिएको भए, दशैमा मासु र विहेमा बनारसी साडी आउथ्यो की !
प्रजिअले प्रधानमन्त्रीलाई भने : भारतीय सेनाले राहत होइन आहत दियो हजुर
ओलीले भारतीय राजदुत रेलाई आन्तरिक राजनीतिमा चासो नराख्न चेतावनी दिएपछि…
कांग्रेसले पाँच सांसदहरुलाई सिफारिस समितिमा बस्न नदिने
वामपन्थी दल एक हुनपर्छः मोहन वैद्य
निर्वाचन आउनै लाग्दा ३०२ प्रहरी इन्स्पेक्टरको सरुवा
भन्सार जाँचपासको कडाइले कर छल्ले ब्यापारीको सामान सीमापारी रोकियो
नक्कली हावी हुँदा ‘जय नेपाल’वालाहरुमा हानाहान !
सातवटै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यका कर्मचारी राख्न माग
देवी ज्ञवाली र प्रचण्डको भेट संयोग कि ओलीको योजना ?